Barataan Oromoo Elias jedhamu kun kaleessa Yuniversiitii Dabra Birihaanitti haleellaa ilmaan Nafxanyaa irraan geesseen du'uun mirkanaahee jira. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBarataan Oromoo Elias jedhamu kun kaleessa Yuniversiitii Dabra Birihaanitti haleellaa ilmaan Nafxanyaa irraan geesseen du’uun mirkanaahee jira.
Joollee keenya naannoo sanitti ugguramtee ajjeechaa dabalatee miidhaan hamaan irraa gahaa jiruuf dirmachuu baannaan MNO gaafatama jalaa hin bahu jennee waywaachaa turre. Ammas du’a mucaa kanaa fi miidhaa joollee keenya kumoota irra gahaa jiruuf OPDO fi mootummaan ishii itti gaafatamoo dha. Joollee san dafanii hin baasan taanaan ummanni keenya jara kana akka ergamtoota diinaatti mirkaneeffatee tarkaanfii laalessaa fudhachuuf of qopheessuu qaba.
Eliasii fi barattoota keenya naannoo sanitti ajjeefaman biroof jannata, maatii fi firootaaf jajjabina hawwina.
Tiruun Bubbulte Lafee Taati (Ibsa ABO – Sadaasa 14 2019): https://t.co/krGGOE80CI